Umgaqo-nkqubo wabucala we-eTN | eTurboNews | Iindaba Zokuhamba
Ikhaya » Umgaqo-nkqubo wabucala we-eTN
Umgaqo-nkqubo wabucala we-eTN
eTurboNews, Inc (eTN) ipapasha lo Mgaqo-nkqubo wabucala we-Intanethi ukwazisa ngeendlela esizenzayo malunga nokuqokelela kunye nokusetyenziswa kolwazi osinike lona ngokusebenzisana nale webhusayithi kunye nezinye iiwebhusayithi ezinxulumene ne-eTN. Lo mgaqo-nkqubo awusebenzi kulwazi oluqokelelwe ngezinye iindlela okanye lulawulwa zezinye izivumelwano.
Indlela Esiqokelela Ngayo Ulwazi
I-eTN iqokelela ulwazi lomntu siqu ngeendlela ezahlukeneyo, kubandakanya xa ubhalisa kwi-eTN kule webhusayithi, xa ubhalisela iinkonzo ze-eTN ngale webhusayithi, xa usebenzisa iimveliso ze-eTN okanye iinkonzo ngewebhusayithi, xa undwendwela iwebhusayithi ye-eTN okanye iwebhusayithi. amaqabane athile e-eTN, kwaye xa ungena kwi-intanethi esekwe kwi-Intanethi okanye i-sweepstake exhaswa okanye ilawulwa yi-eTN.
Xa ubhalisa kwiwebhusayithi yethu, sicela kwaye siqokelele ulwazi olufana negama lakho, idilesi ye-imeyile, ikhowudi ye-zip kunye nomzi mveliso. Kwezinye iimveliso kunye neenkonzo sinokucela idilesi yakho kunye nolwazi malunga nawe okanye ii-asethi zeshishini lakho okanye ingeniso. Nje ukuba ubhalise kwi-eTN kwaye ungene ngemvume kwiinkonzo zethu, awaziwa kuthi.
Abasebenzisi banokukhetha ukuthatha inxaxheba kuluhlu lwee-imeyile ze-eTN (iinkonzo ze-imeyile), ukusukela kwiindaba zemihla ngemihla ukuya kubathengisi abashushu. I-eTN iqokelela ulwazi lomntu siqu ngokubhekisele kubhaliso kunye nokusetyenziswa kwezi nkonzo.
Abasebenzisi banokukhetha ukuthatha inxaxheba kunyuselo kunye / okanye kukhuphiswano lwentengiso olwenziwa yi-eTN amaxesha ngamaxesha egameni labathengi bayo. I-eTN iqokelela ulwazi lomntu siqu ngokubhekisele kubhaliso lwabasebenzisi kunye nokuthatha inxaxheba kukonyusa nakukhuphiswano olunjalo.
Iinkqubo zezeMfundo kunye neeSemina
Abasebenzisi banokukhetha ukuthatha inxaxheba kwiinkqubo zemfundo nakwiisemina eziqhutywa yi-eTN amaxesha ngamaxesha. I-eTN iqokelela ulwazi lomntu siqu ngokunxulumene nokubhaliswa komsebenzisi kunye nokuthatha inxaxheba kwezi nkqubo.
"Iicookies" ngamaqhekeza amancinci olwazi olugcinwa ngumkhangeli wakho kwihard drive yekhompyuter yakho. I-eTN okanye abathengisi bayo banokuthumela ikuki kwikhompyuter yakho kwisikhangeli sakho. I-eTN isebenzisa ikuki ukulandelela izicelo zephepha kunye nexesha lokundwendwela komsebenzisi ngamnye kunye nokusetyenziswa kweicookies kusivumela ukuba sinikeze isikhangeli somsebenzisi ngolwazi olulungiselelwe ukhetho lomtyeleli kunye neemfuno kunye nokwenza lula utyelelo lomsebenzisi kwiwebhusayithi yethu. Unokukhetha ukuba uyayamkela ikuki ngokutshintsha useto lwebrawuza yakho. Ungaseta kwakhona isikhangeli sakho ukuba saliwe zonke iicookies okanye uvumele isikhangeli sakho sikubonise xa kuthunyelwa ikuki. Ukuba ukhetha ukungazamkeli iikuki, amava akho kwiwebhusayithi yethu nakwezinye iiwebhusayithi anokuncitshiswa kwaye ezinye izinto zinokungasebenzi njengoko bekucwangcisiwe.
Idilesi ze IP
I-eTN ifumana ngokuzenzekelayo kwaye irekhode ulwazi kwiincwadi zethu zeseva ezivela kwisikhangeli sakho, kubandakanya idilesi ye-IP, ulwazi lwecookie ye-eTN, kunye nephepha lewebhusayithi olifunayo. I-eTN isebenzisa olu lwazi ukunceda ekuchongeni iingxaki kwiiseva zethu, kulawulo lwenkqubo, kunye nokuvavanya ukugcwala kwiwebhusayithi yethu ngokubanzi. Ingcaciso inokuqokelelwa kwaye isetyenziselwe ukuphucula umxholo wamaphepha ethu eWebhu kunye nokwenza umxholo kunye / okanye ubeko lomsebenzisi ngamnye.
Ukuba uthenga into kwiwebhusayithi ye-eTN, kufuneka sazi ulwazi oluchongiweyo olufana negama lakho, idilesi ye-imeyile, idilesi yokuthumela, inombolo yekhadi letyala, kunye nomhla wokuphelelwa. Oku kusivumela ukuba sisebenzise kwaye sizalisekise iodolo yakho kwaye sikwazise ngemeko yeodolo yakho. Olu lwazi lusenokusetyenziswa yi-eTN ukukwazisa ngeemveliso kunye neenkonzo ezinxulumene noko. Ulwazi lwekhadi letyala aluyi kwabiwa okanye lithengiselwe abantu abangadibaniyo nayo nayiphi na injongo ngaphandle kwemvume yakho, ngaphandle kokuba kufanelekile ukwenza intengiselwano.
Ukuba ukhetha ukusinika iinkcukacha zakho, sizisebenzisa ikakhulu ukuhambisa inkonzo oyicelileyo. I-eTN inokusebenzisa ulwazi lomntu siqu ngeendlela ezahlukeneyo kubandakanya oku kulandelayo:
I-eTN inokusebenzisa ulwazi lomntu buqu ekuqokeleleni kwiwebhusayithi yayo ukuthumela ukukhushulwa kwe-imeyile ekujoliswe kuyo egameni labathengisi bayo kunye namaqabane ayo.
I-eTN ingadibanisa ulwazi malunga nawe esinalo nolwazi esilufumana kumaqabane oshishino okanye ezinye iinkampani ukuze sikwazi ukuhambisa ngcono iimveliso kunye neenkonzo ezinokubangela umdla kwaye zibe luncedo kuwe.
I-eTN inokusebenzisa ulwazi lobuqu ukunxibelelana nabasebenzisi ngokubhekisele ekuhlaziyweni kokubhaliselwa kweenkonzo ze-eTN kunye neemveliso.
I-eTN inokusebenzisa ulwazi oluchongiweyo ukuthumela isaziso nge-eTN's okanye iimveliso kunye namaqabane ethu ngeendlela ezinje nge-imeyile kunye / okanye ngeposi.
o Ukuba unikezela ngolwazi lwezezimali, sisebenzisa olo lwazi ikakhulu ukuqinisekisa ikhredithi yakho kunye nokuqokelela intlawulo yokuthenga kwakho, iiodolo, imirhumo, njl.
I-eTN inokuthumela izibhengezo zemveliso okanye ii-imeyile ezizodwa kubabhalisi abakwi-Intanethi.
Ukuba uthatha inxaxheba kwinkqubo yemfundo ye-eTN, iisemina, okanye enye inkqubo ejonga ixesha, sinokunxibelelana nawe ukukukhumbuza ngemihla emisiweyo ezayo okanye ulwazi olongezelelweyo malunga nezi nkqubo.
Ngamaxesha athile i-eTN iqhuba umrhumo kunye / okanye uphando lwabasebenzisi ukujolisa ngcono umxholo wethu kubaphulaphuli bethu. Ulwazi oluhlanganisiweyo oluqokelelweyo ngamanye amaxesha kwabelwana ngalo nabathengisi bethu, nangona kunjalo, asizukukwabelana ngolwazi oluthile lomntu wesithathu.
I-eTN isebenza kwiwebhusayithi ezininzi ezinomxholo kunye neenkonzo ezinxulumene nokuhamba. I-eTN inokwabelana ngolwazi lomntu buqu oluqokelelwe kubasebenzisi bewebhusayithi zayo ngaphakathi kuzo zonke ezi webhusayithi ukuze isebenze ngcono kubasebenzisi bayo.
I-eTN ineemveliso ezininzi kunye neenkonzo kwaye ngenxa yoko uninzi lwe-imeyile kunye noluhlu lwonyuselo. Kwiinzame zokuvumela abasebenzisi ukuba balungelelanise ukuthatha kwabo inxaxheba kwiinkonzo ze-eTN kunye nokunyuselwa, i-eTN ibonelela abasebenzisi ngesakhono sokukhetha uluhlu oluthile okanye iimveliso ezinomdla kunye nokukhetha ukuphuma kwimveliso kunye nokusetyenziswa / uluhlu oluthile. Lonke unyuselo lwe-imeyile oluthunyelwe luvela kwi-eTN lubonelela ngekhonkco lokuphuma emazantsi e-imeyile ngokulandela apho abasebenzisi banokukhetha ukuphuma kwiimveliso ezithile kunye nokunyuselwa. Ukuba ufumana enye yezi imeyile kwaye unqwenela ukungabhalisi nceda landela imiyalelo enikezwe kwi-imeyile nganye okanye kunxibelelwano [imeyile ikhuselwe]
Amaxesha ngamaxesha sinokusebenzisa ulwazi lwabathengi kwizinto ezintsha, ezingalindelwanga ezingakhange zichazwe ngaphambili kuMgaqo-nkqubo Wobumfihlo. Ukuba ulwazi lwethu lwenkqubo luyatshintsha ngaxa lithile kwixesha elizayo siza kuthumela utshintsho kumgaqo-nkqubo kwiwebhusayithi yethu.
Ukwabelana ngeNkcukacha eqokelelwe namaQela esiThathu
Ngokubanzi, i-eTN ayiqeshisi, ithengise, okanye yabelane ngolwazi malunga nawe nabanye abantu okanye iinkampani ezingenanto ngaphandle kokubonelela ngeemveliso okanye iinkonzo ozicelileyo, xa sinemvume yakho, okanye phantsi kwezi meko zilandelayo:
Sinokubonelela ngolwazi lomntu siqu malunga nabasebenzisi bethu kumaqabane athembekileyo kunye nabathengisi abasebenza egameni okanye kwi-eTN phantsi kwemfihlo kunye nezivumelwano ezifanayo ezinqanda ukusetyenziswa kwamanye amaqela kolwazi. Ezi nkampani zingasebenzisa ulwazi lwakho lobuqu ukunceda i-eTN ukunxibelelana nawe malunga nezibonelelo ezivela kwi-eTN kunye namaqabane ethu kwintengiso. Nangona kunjalo, ezi nkampani azinalo ilungelo elizimeleyo lokusebenzisa okanye lokwabelana ngolwazi.
Xa ubhalisela inkqubo yemfundo, ukhuphiswano, okanye olunye unyuselo oluxhaswe ngumntu wesithathu, umntu wesithathu uya kunikwa ulwazi oluchongiweyo ngaphandle kokuba kuthunyelwe ngolunye uhlobo malunga nonyuselo.
I-eTN inokuthi kumaxesha ngamaxesha yabelane ngolwazi lomntu siqu olufana needilesi ze-imeyile nabantu abathembekileyo abahambisa umxholo onokuba nomdla kumsebenzisi kwaye kuxhomekeke ekuphumeni koxanduva kwicala lomntu wesithathu.
Singabelana ngolwazi lomntu siqu apho sikholelwa ngokuthembekileyo ukuba isenzo esinjalo siyimfuneko ukuze sihambisane nenkqubo yezomthetho, umyalelo wenkundla, okanye inkqubo yezomthetho enikezelwa kwi-eTN, okanye ukuseka okanye ukusebenzisa amalungelo ethu asemthethweni okanye ukuzikhusela kumabango asemthethweni.
Singabelana ngolwazi olunjalo apho sinokholo oluqinisekileyo lokuba kuyafuneka ukuphanda (okanye ukunceda kuphando), ukuthintela, okanye ukuthatha amanyathelo malunga nezinto ezingekho mthethweni, ubuqhetseba obukrokrelwayo, iimeko ezibandakanya izoyikiso kukhuseleko lomzimba. nawuphina umntu, ukophula imigaqo yokusetyenziswa kwe-eTN, okanye njengoko kufunwa njalo ngumthetho.
o Ukuba i-eTN ifunyenwe okanye yadityaniswa nenye inkampani, siya kugqithisela ulwazi malunga nawe kule nkampani ngokunxulumene nokufumana okanye ukudityaniswa.
Amaqela engxoxo nge-imeyile ayafumaneka kubasebenzisi bethu kwezinye zewebhusayithi zethu. Abathathi-nxaxheba kufuneka bazi ukuba ulwazi oluchaziweyo kolu luhlu lweengxoxo lwenziwa lufumaneke kuwo onke amalungu kwaye ke luba lulwazi loluntu. Sicebisa ukuba ulumke xa usenza isigqibo sokuveza naluphina ulwazi oluyimfihlo kula maqela eengxoxo.
Le webhusayithi ithatha amanyathelo okhuseleko afanelekileyo okukhusela iinkcukacha zakho. Xa sithumela kwaye sifumana iintlobo ezithile zolwazi olubuthathaka olufana nekhadi letyala kunye nolwazi lwentlawulo, siphinda siqondise abasebenzisi kumzi mveliso we-SSL oMiselweyo weSecurity Socket Layer. Ngenxa yoko, idatha ebuthathaka oyifaka kwiwebhusayithi yethu enjengekhadi letyala kunye nolwazi lokuhlawula ludluliselwa ngokukhuselekileyo kwi-Intanethi.
I-eTN ayinaxanduva lwako nakuphi na ukophula umthetho wezokhuseleko okanye naziphi na izinto ezenziwa ngabantu besithathu abafumana ulwazi. I-eTN ikwanxibelelana nezinye iindidi zezinye iisayithi kwaye iqulethe iintengiso zomntu wesithathu. Asinaxanduva lwemigaqo-nkqubo yabo yabucala okanye indlela abaluphatha ngayo ulwazi malunga nabasebenzisi babo.
Malunga nemfihlo yabantwana
Le webhusayithi ye-eTN ayenzelwanga ukuba isetyenziswe ngabantwana kwaye i-eTN ayiqokeleli ulwazi ngabantwana. Kuya kufuneka ube uneminyaka eli-18 ubudala ukufikelela okanye ukusebenzisa le ndawo.
Hlaziya / Guqula idatha yakho
Ukuhlaziya idilesi ye-imeyile okanye utshintshe i-imeyile oyikhethayo nceda unxibelelane [imeyile ikhuselwe]
I-eTN inelungelo, nangaliphi na ixesha kwaye ngaphandle kwesaziso, ukongeza, ukutshintsha, ukuhlaziya okanye ukuguqula lo Mgaqo-nkqubo wabucala, ngokuthumela olo tshintsho, uhlaziyo okanye uguqulo kwiwebhusayithi. Naluphi na utshintsho olunje, uhlaziyo okanye uhlengahlengiso luya kusebenza kwangoko xa kubekwa kwiwebhusayithi. Abasebenzisi baya kwaziswa ngotshintsho kule Mgaqo-nkqubo wabucala ngokusebenzisa ikhonkco "lokuhlaziywa kwangoku" kwiwebhusayithi ye-eTN.
Yeyiphi enye into endifanele ukuyazi malunga nobumfihlo bam xa ukwi-Intanethi?
Iwebhusayithi ye-eTN iqulethe ii-hyperlink ezininzi kwezinye iiwebhusayithi. Iwebsite ye-eTN iqulethe iintengiso zomntu wesithathu. I-eTN ayinaxanduva lokuziphatha ngasese okanye umxholo wewebhusayithi yesithathu okanye yabathengisi. I-eTN ayabelani nolunye ulwazi lomntu onika i-eTN kunye neewebhusayithi ezinxibelelana ne-eTN, ngaphandle kokuba kuchaziwe kwenye indawo kulo Mgaqo-nkqubo wabucala, nangona i-eTN inokwabelana ngedatha ehlanganisiweyo kunye nezo webhusayithi (ezinje ngokuba bangaphi abantu abasebenzisa iSiza sethu).
Nceda ujonge kula masayithi wesithathu ukumisela imigaqo-nkqubo yabucala. Xa i-eTN ifaka umxholo womntu wesithathu kwelinye lamaphepha e-eTN, i-eTN iyakusebenzisa iinzame ezifanelekileyo ukucebisa abasebenzisi bethu ukuba baphumile kwiwebhusayithi ye-eTN kwaye bangena kwiwebhusayithi elawulwa ngumntu wesithathu. Abathengi / abasebenzisi kufuneka bafunde kwaye baqonde nawuphi na umgaqo-nkqubo wabucala ophawulwe kuzo zonke iiwebhusayithi zomntu wesithathu.
Nceda ugcine engqondweni ukuba nanini na xa uxela ngokuzithandela iinkcukacha zakho kwi-Intanethi- umzekelo nge-imeyile, uluhlu lweengxoxo, okanye kwenye indawo-olo lwazi lunokuqokelelwa kwaye lusetyenziswe ngabanye. Ngamafutshane, ukuba uthumela iinkcukacha zakho kwi-intanethi ezifikeleleka kuluntu, unokufumana imiyalezo engacelwanga evela kwamanye amaqela ngembuyekezo.
Ekugqibeleni, luxanduva lwakho kuphela ekugcineni imfihlo yolwazi lwakho. Nceda uqaphele kwaye uxanduva nanini na xa ukwi-Intanethi.
Amalungelo akho abucala eCalifornia
Phantsi kwesibonelelo somthetho waseCalifornia, umhlali waseCalifornia onikezele ngolwazi lomntu buqu kwishishini athe waseka ulwalamano lweshishini naye, usapho, okanye iinjongo zekhaya ("umthengi waseCalifornia") unelungelo lokucela ulwazi malunga nokuba Ishishini lichaze ulwazi lomntu siqu kuye nawuphi na umntu wesithathu ngenjongo yokuthengisa ngokuthe ngqo kwiqela lesithathu. Ngenye indlela, umthetho ubonelela ukuba inkampani inomgaqo-nkqubo wabucala onika ukhetho lokuphuma okanye lokukhetha ukusebenzisa iinkcukacha zakho zobuqu ngabantu besithathu ngeenjongo zokuthengisa, inkampani inokuthi ikunike ulwazi ngendlela yokusebenzisa ukhetho lwakho lokukhetha oluchaziweyo.
Kuba le ndawo yenzelwe ukuba isetyenziselwe ishishini-ukuya-kwishishini, eli lungiselelo lomthetho waseCalifornia alizukusebenza, kwimeko ezininzi, kulwazi oluqokelelweyo.
Ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba umhlali waseCalifornia asebenzise leSayithi buqu, usapho, okanye iinjongo zekhaya efuna ulwazi olugubungele umthetho, eli Siza lilungele enye indlela. Njengoko kuchaziwe kumgaqo-nkqubo wabucala, abasebenzisi beSayithi banokukhetha ukuphuma okanye basebenzise ulwazi lwakho lomntu wesithathu. Ke ngoko, akunyanzelekanga ukuba sigcine okanye sichaze uluhlu lwamaqela esithathu afumene iinkcukacha zakho kunyaka ophelileyo ngeenjongo zokuthengisa. Ukuthintela ukutyhilwa kweenkcukacha zakho ukuze zisetyenziselwe ukuthengisa ngokuthe ngqo ngumntu wesithathu, sukungena kusetyenziso olunjalo xa unikezela ngeenkcukacha zakho kwiSiza. Nceda uqaphele ukuba nanini na xa ukhetha ukungena ukufumana unxibelelwano lwexesha elizayo kwiqela lesithathu, ulwazi lwakho luya kuba phantsi komgaqo-nkqubo wabucala weqela lesithathu. Ukuba kamva ugqiba kwelokuba awufuni ukuba umntu wesithathu asebenzise ulwazi lwakho, kuya kufuneka unxibelelane nomntu wesithathu ngokuthe ngqo, njengoko singenakho ukulawula indlela abantu besithathu abalusebenzisa ngayo ulwazi. Kuya kufuneka usoloko ujonga umgaqo-nkqubo wabucala walo naliphi na iqela eliqokelela ulwazi lwakho ukumisela ukuba eli ziko liya kuliphatha njani ulwazi lwakho.
Abahlali baseCalifornia abasebenzisa le ndawo ukulungiselela umntu, usapho, okanye iinjongo zekhaya banokucela ulwazi oluthe kratya malunga nokuthobela kwethu lo mthetho nge-imeyile [imeyile ikhuselwe] Kuya kufuneka ubeke ingxelo ethi "Amalungelo akho abucala eCalifornia" kwicandelo lesifundo le-imeyile. Nceda uqaphele ukuba kufuneka siphendule isicelo esinye ngonyaka ngamnye, kwaye akukho mfuneko yokuba siphendule kwizicelo ezenziwe ngezinye iindlela ngaphandle kwale dilesi ye-imeyile.
Imvume yakho kulo Mgaqo-nkqubo
Ngokusebenzisa iwebhusayithi yethu, uyavuma ukuqokelelwa kunye nokusetyenziswa kwengcaciso yi-eTN njengoko kuchaziwe kulo mgaqo-nkqubo. Nceda uqaphele ukuba ukusebenzisa kwakho iwebhusayithi kulawulwa yimiqathango kunye neemeko ze-eTN. Ukuba awuvumelani nemigaqo yoMgaqo-nkqubo wabucala okanye iMiqathango neMeko, nceda ungasebenzisi iwebhusayithi, iimveliso kunye / okanye iinkonzo.
Nceda uthumele nayiphi na imibuzo malunga noMgaqo-nkqubo wabucala we-eTN ku [imeyile ikhuselwe]
Qaphela: Ukutshiza akunxibelelani nabasebenzisi bokugqibela kwiwebhusayithi yakho. Olona khetho lunye lokwenza u-Smush unalo kwincwadana yokubhalisela ii-admins zesiza kuphela. Ukuba ungathanda ukwazisa abasebenzisi bakho ngale migaqo-nkqubo yakho yabucala, ungasebenzisa ulwazi olungezantsi.
USmush uthumela imifanekiso kwiiseva zeWPMU DEV ukuzilungiselela ukusetyenziswa kwewebhu. Oku kubandakanya ukuhanjiswa kwedatha ye-EXIF. Idatha ye-EXIF iya kuhluthwa okanye ibuyiselwe njengoko injalo. Ayigcinwanga kwiiseva zeWPMU DEV.
USmush usebenzisa inkonzo ye-imeyile yomntu wesithathu (iDrip) ukuthumela ii-imeyile zolwazi kumlawuli wesiza. Idilesi ye-imeyile yomlawuli ithunyelwa kwi-Drip kwaye ikuki isethwe yinkonzo. Ulwazi lomlawuli kuphela luqokelelwa ngu Drip.